Video Archives — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Ma ku nooshahay Life ka Good?
Horaantii sanadkan ayaan u tegey on safar la aan kitaabkayga ka cusub, Life The Good. habeen walba, Waxaan siiyey hadalka ah in ay isku dayeen in ay ka jawaabaan su'aasha ah, "Maxay ka dhigan tahay in ay ku noolaadaan nolol wanaagsan?” In Chattanooga, TN, waxaan diiwaan fariin, waxaana ka sarreeya ayaan u posted. Buuga sii daayay October 1, 2012 oo aad u iibsan kartaa halkan. Si aad wax badan oo ku saabsan buugga ka baran waxaad riixi kartaa halkan. Waxaad ka iibsan kartaa The album Life Good halkan. Ma ku nooshahay nolol wanaagsan?
The Documentary Good Life Mini
Eeg ee TT la Trip Lee sida ayuu ka hadlaysaa highs iyo hooseyso ee geedi socodka uu album ugu dambeeyey “The Life Good.”
The Lives Quruxda dhalan ah
Safarka Lee on "Life Beautiful” ka waxay doonayaan Ilaah on vimeo.
song ugu horeeyay ee aan qoray aan album ugu dambeeyey, “Life The Good” ahaa song ah oo lagu magacaabo "Beautiful Life.” Waxay doonayaan Ilaah i weydiiyay oo ku saabsan song iyo qalbigayga waxaa ka dambeeya. Halkan ay dhan post blog.
Oo halkan waa lyrics in ay gabaygii, kaas oo kasoo muuqday V. Rose:
Nolosha Neefsashada guurista
Sidaas daraaddeed ha Hope Kac
Ilaah ogaa waxa uu sameynayo
Markii uu siiyey
Life Beautiful Beautiful
walaashay Gacaliye, Waxaan maqli meesha aad ee
Waan ogahay waxa aan la waxba xumad fudud maraya in
Waxaa jira ilmo ee uurkaaga, laakiin ma uu isku dayayo in la sameeyo
Waxaad dhan dib haddii aad ogaa in ay ku qaadan lahaa, laakiin aad aan la qabto wax fikrad ah in
Waqtigaas iyada oo aad saaxiib, habeenkaas xilli dambe
Marka aad u maleeyeen in aad waxaa jacaylka samaynta, in aad nolosha ka dhigi lahaa
Oo haatan waxa uu dareensan caddaalad darro, nin aan la jeclaan
Waxaad aan la heystaa nolol, toogan, waqtiga run ahaantii ma aha xaq u
ma arrin kuu sheegi karaa in aan fahamsanahay xanuunkaaga
Laakiinse waan aqaan ma aha in aad dareento niyad iyo xishoon
Oo anna waxaan ogahay ilmahaaga in aad caloosha ma aha ciyaar
Waxa uu helay garaaca wadnaha a, uu xumad si ay u koraan…
Eebaha Jinniyona ah
Waxaan doonayaa in ay bilaabaan by fikirka ku saabsan sheekooyin. Tan iyo bilowgii markii ay jiraan mawduucyada caadiga ah qaarkood oo dhex mara sheekooyin our. Waxaan leenahay sheekooyinka jacaylka, majaajilooyin, iyo musiibooyin - ama isku dar ah ee dhan ka mid ah oo loo yaqaano comedy jaceyl. Laakiin dhammaan noocyada kala duwan ee kuwa movies, waxaa jira laba mawduuc in had iyo jeer u muujiyaan ilaa: wanaagga iyo xumaanta.
Ka fikir movies aad jeceshahay. In Braveheart, Scotland iyo William Wallace waa wanaagsan yihiin,, halka England iyo King Edward xun. In taariikhda Narnia ee kids iyo Aslan waa wanaagsan yihiin,, iyo saaxirad way xun. Xitaa filimada Disney, tani run tahay. In Aladdin, Aladdin iyo Converter waa wanaagsan, laakiin Jacfar waa xun. Ha u dhaqmin sidii aadan aqoon ku saabsan Aladdin.
Waxaad mar walba dooneysaa dhinaca wanaagsan inuu ku guuleysto iyo wakhtiga intiisa badan oo ay doonayeen.
Sidaas marka aan bilaabaan in ay ka hadlaan oo ku saabsan Ciise iyo marka aan bilaabaan in ay ka hadlaan Ilaah dadka mararka qaar u maleeyaan in qaybaha isku. Waxay u malaynayaan caalamka oo dhan sida dagaal runtan u dhexeeya Ilaah iyo Devil ah. Iyo sida oo dhan of sheekooyinka aannu u jecel, aan ka yaabaynin dhamaadka ay u arkaan oo ku guuleystay. Waa Ciise oo keliya ah…
Halkan video ka khudbada aan dhawaan jooga shir Church ee Raleigh, NC. Aan idinku wacdiyey on Mark 5:1-20 ku saabsan awoodda, xujo, iyo Naxariis u ah Ciise. Waxaan rajeynayaa inay noqoto dhiirigelin ah in aad
Duulaankii Video The
Waayo, kuwa idinka mid ah oo aan waligay ma arag video for my song "duulaankii (Hero)” Halkan waa. Ku raaxayso! Waxaan rajeynayaa in aad ka caawisaa inay dhawraan wax indhihiinna on Masiix.
Injiil Coalition Video
Recent video Injiil Coalition of Eric Mason, Lecrae, oo ii hadlayaan waawayn madow iyo “edeb” fiqiga